वर्तमान समयमा यो कसैले सुन गरगहना हेर्न असामान्य छ। तर सबैले त्यहाँ सुन उत्पादन केही नमूनाहरू हुन् भनेर थाह छ। यस लेखमा नजिकको 375 को एक नमूना हेर्न, र यो कसरी 585 देखि अलग छ।
सुन एक नमूना के हो?
सुन मानक - रूपमा त्यहाँ एउटा आभूषण छ भन्ने सुनिश्चित गर्न उत्पादन राखिएका छन् कि विशेष टिकटहरु रहेका मिश्र धातु मा निहित बहुमूल्य धातु रूपमा परिभाषा, बहुमूल्य धातु। कानून राम्ररी आभूषण र तिनीहरूलाई लागू गर्ने संस्थाहरू रूपमा ट्रकहरु। हाल चार सक्रिय जांच सिस्टम हो। लोकप्रिय सुन द्वारा नमूनाहरू समावेश 375, 585, 750, 958।
375 सुन परीक्षण: यो के हो?
सबैभन्दा कम गुणस्तर बीच नमूनाको सुन बनेको लेख। तर केही देशहरूमा, यो 375 र 333 नमूनाहरू रूपमा मान्यता छ। छोटो अवधि मा मिश्र धातु हावा मा गाढा सुरु देखि आधुनिक आभूषण नमूना 375 मा यो एकदम दुर्लभ छ। तथापि, तपाईं 375 सुन नमूना चिनारी संग आभूषण को धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। यो के हो? यसको शुद्ध रूप बहुमूल्य धातु को एक कम सामग्री यो assay। को impurity - यसको सामग्री मात्र 37,5%, बाँकी छ। यो नमूना पाँच ब्रान्डहरु छ।
अशुद्धियों एक उच्च सामग्री उत्पादन र रंग को गुण असर गर्न सक्छ?
तामा को प्रतिशत सामग्री उच्च हो भने, jewel एक संतृप्त रातो वा पहेंलो हुनेछ। साथै, तामा समाप्त उत्पादन खराब प्रभाव कि जंग प्रतिरोध कम गर्न सक्षम छ।
चाँदी प्रतिशत उच्च छ भने, आभूषण को टुक्रा हल्का पहेंलो वा सेतो छ। कारण चाँदी उत्पादनहरु को उच्च सामग्री थप लोचदार बन्न र साना ढाँचाको सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
लामो समय छैन लगाउने भने, र नमूना संग आभूषण सफा छैन, त्यसपछि एक निश्चित अवधि पछि गाढा र यी सुन उत्पादनहरु लगाउन अयोग्य हुन्छन्। कैरेट 375-सुन अन्य नमूनाहरू देखि एक प्रमुख फरक छ - उनि एकदम टिकाउ छन्, तर गरिब गुणस्तर को हो।
तर हामी पूर्ण, दिएको नमूना संग उत्पादन बेवास्ता गर्नु हुँदैन एउटा सानो रकम लागि तपाईं आभूषण हेरविचार को योग्य उत्पादन, तिनीहरूले धेरै वर्ष को लागि तपाईं प्रसन्न गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न भने, एकदम सभ्य घन्टी वा कान को बाली खरिद गर्न सक्नुहुन्छ रूपमा। यी उत्पादनहरूमा धेरै किफायती मूल्य तुलना सुन 750-औं नमूना।
375 नमूनाहरू विशेषताहरु
यसअघि 375 सुन नमूना विस्तृत छलफल गरिएको छ - यो के हो। हामीलाई नमूनाको विशेषताहरु ध्यान दिनुहोस्:
(पहिले उल्लेख रूपमा) पहिले, यो मिश्र धातु मात्र 37,5% शुद्ध सुन छ।
चाँदी र तामा - दोश्रो, यो सुन मिश्र धातु दुई बहुमूल्य धातु हुन्छन्।
तेस्रो, रूस त्यहाँ पाँच मात्र मिश्र, 375 सुन नमूना राख्न अनुमति जो छन्।
चौथो, यी मिश्र आफ्नो गुणस्तर कम छ रूपमा, सीमित परिमाणमा प्रयोग र अन्ततः छन् तिनीहरूलाई बनाइएका उत्पादनहरु, पुरानो आकर्षक फर्कन धेरै गाह्रो छ, जो, फिक्का को टुक्रा परिवर्तन छन्।
मिश्र धातु बनेको उत्पादन 375 नमूनाहरू रातो पहेंलो देखि एक रंग हुन सक्छ, सबै कुरा को मिश्र धातु predominates को अनुपात निर्भर हुनेछ।
सबैभन्दा ठोस र उच्च गुणस्तरीय मिश्र गुलाबी हुन मानिन्छ।
सबै भन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरु 375 नमूनाहरू छलफल संलग्नता छल्ले प्रयोग गरेर।
सुन 375 नमूनाहरू को मिश्र
पहिले नै उल्लेख रूपमा, सुन नमूनाहरू चाँदी र तामा मिश्र धातु प्रस्तुत। यो तामा र चाँदी विभिन्न प्रतिशतको संग मिश्र आवंटित गर्न सम्भव छ कि निम्नानुसार:
सुनको अनुपात 37,5% गर्न मात्रा wherein को मिश्र धातु, एक उज्ज्वल रातो रंग छ भने, चाँदी राशि मात्र 2% हुन, र तामा थियो - स्कोर: 60.5 शुद्धता%।
यस मिश्र धातु रातो रंग छ भने - 52.5% - 37,5% गर्न सुन मात्रा को अनुपात, चांदी मात्र 10% तामा हुनेछ, र।
37,5%, चाँदी राशि - - 16%, र तामा - 62,5% को मिश्र धातु रातो रंग, सुनको अनुपात छ भने।
यी मिश्र को सबै सुरक्षित कि घटिया मान गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसैले तिनीहरू विदेश छैन धेरै लोकप्रिय छन्। तर तपाईं संयुक्त राज्य वा संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण भने, निश्चित 375 नमूना बाट उत्पादनहरु को एक विशाल श्रेणी मार्फत आउन हुन। को 375 नमूनाहरू देखि आभूषण टुक्रा खरीद गर्नु अघि सुन कैरेट 375 ग्राहक समीक्षा बारेमा विस्तृत मा अध्ययन गर्न निश्चित हुन।
धेरै अक्सर अघि आभूषण, ग्राहकहरु को विचार अन्वेषण किन्न पहिलो समीक्षा पढ्नुहोस्, फोटो ग्यालरी आभूषण पसलहरूमा हेर्न, र त्यसपछि अन्तिम विकल्प बनाउन। एक हात मा, दृष्टिकोण भण्डारमा तपाईं धोका र उनीहरूको उत्पादन बेच्न फरक दन्तिये धेरै भन्छु, सकिन्छ, एकदम सुरक्षित सही छलफल हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, अझ त सुन 375-औं नमूना बारेमा मंच मा तपाईं इन्टरनेटमा पढ्न सबै, र भरोसा छैन। रूपमा सबैलाई खुसी छैन समीक्षा, फरक हुन सक्छ, र सबैलाई फरक स्वाद छ।
तर हामी सबै प्रतिक्रियाहरू विश्लेषण भने, त्यहाँ सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक हुनेछ, र यो सबै यो नमूना मात्र drawback संग जडित - गरिब गुणस्तर र छोटो-बस्थे। पनि यो किनकी यो उत्पादन को हेरविचार निर्भर र यसलाई सही हो भने, त्यसपछि कम गुणस्तर संग पनि budgetary उत्पादन लामो समय को लागि पछिल्लो गर्न सक्छन्, debatable छ।
के 375th देखि सुन 585-औं नमूना distinguishes?
अर्को, नजीकको, के फरक नमूनाहरू संग Jewels बीच मतभेद छन् लिनुहोस्:
उत्पादन 1. विभिन्न सुन सामग्री: 375 नमूनामा - 37,5%, र 585 - 58.5%।
सुनको कम सामग्री संग उत्पादनहरु 2. शक्ति उच्च-उत्पादनहरूमा भन्दा उच्च छ। यो बारेमा पहिले भने गरिएको छ - 375 सुन परीक्षण: यो के हो?। यो नमूना संग उत्पादन उच्च बल छ, र यसैले अक्सर ठीक यस्तो नमूना संग संलग्नता छल्ले प्राप्त।
3. साथै, सुन को एक ठूलो प्रतिशत संग उत्पादनहरु कम भन्दा धेरै महंगा हुनेछ। तसर्थ, हामी 375 सुन fineness संग उत्पादनहरु को कम मूल्य बताउन सक्नुहुन्छ।
4 आभूषण कि 585, शक्ति र प्रकाश छ, र यी गुणहरू यो masterpieces सिर्जना गर्न सम्भव बनाउन 375 संग।
तपाईं लगाएको मान्यता र STEREOTYPES ध्यान भने छैन, तर अझै पनि स्थायित्व र व्यावहारिकता रुचि, यो 375 सुन नमूना रूपमा बजेट विकल्प हेर्न छ।
संसारको सबैभन्दा महंगा घन्टी के हो?
किन आभूषण लागि कनेक्टरों?
आफ्नो घाँटी वरिपरि किन गाढा चाँदी जान्न चाहनुहुन्छ?
Laminate बिछाउने लागि आवश्यक उपकरण
ब्लगर ब्रायन ITA। ब्रायन नक्सा कहाँ गर्छ?
Aldar Tsydenzhapov इतिहास कमाल
सर्वश्रेष्ठ जिम, नोवोसिबिर्स्क
उल्टी, पखाला र उमेर को बच्चा2वर्ष को एक तापमान। आफ्नो अवस्था कसरी सुख, के गर्न?
Kegel घर को मांसपेशिहरु बलियो बनाउन अभ्यास!
"Tenorik": डाक्टर को समीक्षा। वृद्धि दबाव को ट्याब्लेटको
आफ्नो हातले बगैचा swings